Ukuhamba ngebhayisikili emaHlangeni aseScotland
I-A Guide Guide nge-Scottish Highlands
Ibhalwe on 14 November 2014 . Kuthunyelwe ku Imisebenzi
Ukuhamba ngebhayisikili e-HighlandsKunezinkampani eziningi zendawo yokugibela ibhayisikili namaqembu amaningana okukhankaso eYurophu nase-UK. I-CTC yimizimba eyodwa ehlanganisa zonke izinhlobo zokusebenzisa umjikelezo kanye nezithakazelo.
Amathiphu okuhamba ngebhayisikili emigwaqweni ngokuhamba ngokuphepha Landela i-Highway Code - ungagxili izibani ezibomvu futhi ungahambi emgwaqweni ngaphandle uma kungumzila wokujikeleza okhethiwe; Esikhathini sezulu esimanzi bukela ijubane lakho njengoba izakhiwo zingase zishaye futhi kuzokuthatha isikhathi eside ukuyeka; Hamba ngendlela enhle, ngokucacile nangokucacile kwesikhala; Cabanga ukugqoka isigqoko; Gcina i-bike yakho efanelekile.
Qinisekisa ukuthi abashayeli bangakubona uhamba endaweni lapho ungabona futhi ubonwe khona; Sebenzisa izibani futhi ucabange ukugqoka izingubo ezikhanyayo noma ezibonakalayo, ikakhulukazi emadolobheni, ebusuku nasebusweni obubi; Hlangana nabanye abasebenzisi bomgwaqo, ikakhulukazi emaqenjini, bese wazi ukuthi bakubonile; Bhalisela ngokucacile ngaso sonke isikhathi; Sebenzisa ibell yakho - hhayi bonke abahamba ngezinyawo bangakubona uqaphela izimoto Ukushayisana okuningi kwenzeka lapho umqhubi wamakhilomitha engaphakathi kwezimoto eziphendukela ngakwesobunxele. Ungacabangi ukuthi imoto iya phambili ngokuqondile ngoba ayikho uphawu lokushiya kwesokunxele. Gwema njalo 'ukwenza' noma yikuphi imoto kule nkinga - kungcono ukubuyela emuva kuze kube yilapho imoto isusile. Amathiphu kwabagibeli Ukwenza imigwaqo iphephile njengoba kungenzeka, abashayeli bezimoto kumele baqaphele nabashayeli bamabhayisikili futhi: Uma bebuka amabhayisikili abahamba ngakwesokunxele beza ngaseceleni kwakho futhi ungawasika; Nikeza abahamba ngebhayisikili ububanzi obukhulu lapho befika;
Ebusuku, cwilisa izibani zakho lapho ufika kumabhayisikili; Esimo sezulu esimanzi, vumela abahamba ngebhayisikili ithuba lokubamba njengendawo yokuqhafaza. Khumbula, abashayeli bamabhayisikili nabagibeli banelungelo lokusebenzisa futhi babelane ngendawo efanayo yomgwaqo. Ukuhlonipha bonke abasebenzisi bomgwaqo kusiza wonke umuntu ukuba azuze ekuhambeni ngomgwaqo. Ukuze uthole ukwaziswa okwengeziwe iya ku- - https://www.gov.uk/browse/driving/highway-khodi I-PLACE EYAQALA QALA
I-Callander ihlala engxenyeni esempumalanga yeLoch Lomond neTrossachs National Park futhi iyindawo yokuqala yokuhlelwa kweLocch & Glors yaseScotland Thola indawo ekhangayo yasezingxenyeni ezisentshonalanga eScotland eWest Highland Way. Izintaba eziqhaqhazelayo, izintaba ezinomsoco kanye nokuqhuma imifula zihlanganisa ukukuvuza nge-landscape eyingqayizivele neyashintshayo njengoba uhamba ngamamayela angu-96 ukusuka eMilngavie (eGlasgow) waya e-Fort William, uhlinzeka ngeBet and Breakfast Breakfast endleleni, uthola lochs enokuthula , izinqaba ezinkulu zezintaba zebhayisikili ukusuka e-Fort William kuya e-Inverness, ehamba ngezinye izindawo ezivusa amadlingozi kakhulu ngosuku futhi samphakamise ukuvakasha okukhulu kwezemvelo ezindaweni eziningi zokulala nokudla kwasekuseni ebusuku, NgoRamnoch Moor, eKlochleven nge "Devil's Staircase, Ben I-Nevis ne-Fort William, i-Scotland Outdoor Capital ekhanda likaLoch Linnhe.
Hamba nge-landscape ye-lochs ne-glens eyenza i-Loch Lomond ne-Trossachs National Park ne-Highland Perthshire. Hlola iScotland ngenkathi ujikeleza ngeParker National Park. Amadolobha asezindaweni eziphakeme ezithandekayo, izinqaba zomlando, i-Speyside malt whiskeys, amabutho aseJacobite, Ukuze uthole i-pase kancane ephumule futhi ejabulisayo ukuze uthathe imibono yasemaphandleni ezungeze uLoch Ness, thatha ibhayisikili.
Indawo yaseLoch Ness inikeza izindawo eziningi ezivela emigwaqweni emincane yeCaledonian Canal ukuze kube inselele, ibanga elide, imizila engafanele emgwaqeni njengeGlen Way. Imigwaqo enhle yezwe yaseStrandnairn nehlangothini eningizimu ye-loch inkulu kubagibeli futhi kunezintaba eziningi zokuhamba ngebhayisikili. Indawo yeStathglass inikeza isipiliyoni sebhayisikili sezintaba ukuze sibhekane nanoma yikuphi ezweni. I-strath ihamba phakathi kwe-Beauly neLoch Ness, ihlinzeka ngemigwaqo eminingi ehlathini, ifike ekugcineni kweGriff of Affric, Cannich neStathfarrer emangalisayo. Izindebe ezincane zeGlen Cannich zikhuphuka kakhulu ngaphezu kweKannnich, kanti intaba emfushane, kodwa ehlaba umxhwele ivumela ukutholakala kwamathrekhi amahlathi, okuhambisana nokuhamba okunye emgwaqweni oMoya weMellardoch, uzokuyisa eLoch Mullardoch, ama-9 miles kude.
Lokhu kuyibona okumangalisayo, okuzungezwe izintaba eziphakeme. Ukukhuphuka ngoGlen Cannich ngokuqinisekile kunomphetho kodwa umgwaqo uthule futhi ubuyele, wonke wehla! I-Glen Affric, ingasondelwa cishe ngokuphelele emigwaqweni yamahlathi kusukela ku-Cannich naseTomich, yima ogwini lwaseLoch Beinn a 'Mheadhoin, ilanga lomlingo wamanzi. Izindebe ezisezantsi eningizimu kaTomich ne-Cannich, kuya ku-Corrimony noma ngisho naseGlenmoriston, ziyizingoma ezikude kude nazo zonke, Kuyindlela enhle ye-desert Umzila ovela ku-Dog Falls kuya ku-Knockfin uyamangalisa, njengoba uphokophele ku-Tomich, noma ngokunye kusuka eLoch Affric kuya kuTomich nge-West Guisachan, i-Cougie nePlodda Falls. Ukwandisa kusuka kulokho, ungaqhubeka ngaphezu kwezintambo ezisezantsi eningizimu kaTomich no-Cannich, ku-Corrimony noma ngisho naseGlenmoriston, Indawo enhle yokuhlala eBhedi naseSikhumulweni sezwe iGeorge Inn Inn ngaphandle kokupaka komgwaqo nokugcina isitoreji, amamitha ayisithupha ukuya ukuqala kwe-strathglass nezinye izinto eziqhakazile kule ndawo, kuhle kakhulu futhi kugcwalisa ukudla kwakusihlwa wendawo ye-ale, nobhiya nokudoba ukuphelela kusihlwa ngaphambi kokulala, ekuseni ekuseni ukudla okuhle kwasekuseni okusemaphandleni ukugcina uhamba usuku lonke I-Highland Highland Glen Indlu
Thola izintaba, ama-lochs nobubanzi obunamandla be-Isle of Skye njengoba ujikeleza ubude nobubanzi beziqhingi ezihlabayo ezigcwele izilwane zasendle neziqhingi ze-hideaways ezizinzile, izindawo ezingenalutho lapho ungakujabulela ukuchitha isikhathi sangempela semfanelo. Ugu lolugagasi lwe-Islay luhle kakhulu i-Arran, i-Islay ne-Jura yizindawo eziyingqayizivele zokuzungeza, futhi inikeza isiqalo esisha esiqhingini. Imigwaqo ezungezile eziqhingini ilahlekile yenza kube yinto emangalisayo, ingalokothi ikhohlwe isipiliyoni. Isiqhingi sokubhukuda singcono kakhulu ngamachwebeni amahle namaphakheji athatha wena ezindaweni ezintsha, unikeze Ukulala nokudla kwasekuseni ukuze uhambo oluhambayo luzolala ebusuku.
Lona abathandi be-whisky iphupho ligcwaliseka, ne-distilleries ayisishiyagalombili eziqhingini kanye nezindawo eziningi zokubambela kakhulu kanye ne-Bed and Breakfast futhi! Amadolobha aseziqhingini asuke ehlanjululwa kahle futhi ama-whiskeyi adlala kahle kakhulu ngemva kokuhamba ngebhayisikili emini, Ukuhamba ngqo enyakatho yeScotland kusho ukuthola ogwini olumangalisa nje.
Ukuhamba ngebhayisikili nxazonke ze-Dunnet Head kukudlulela ezindaweni ezinhle kakhulu nezindebe eziziqhayisa ngamabhishi amahle kanye nokubukwa kweziqhingi ezingezansi, kunezindawo eziningi zendabuko ezizohlala zihlala nokukhethwa kwamabhilidi, amahostela njengezinkampani ezincane, amahostela kanye namahhotela ane charm ethile ngabo. Uzothola ukwamukelwa okufudumele nomaphi lapho uhlala khona eScotland futhi uzothola ukuthi izindawo eziningi zinikeza isitoreji esiphephile ngamabhayisikili akho.